Sirdoonka Soomaaliya oo lagu eedeeyay in Al-Shabaab ay ka taag... | Universal Somali TV
Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa qortay in xiriir xoogan uu dhaxeeyo ciidanka milatariga Soomaaliya saraakiisha sirdoonka iyo dagaalyahanada Al-Shabaab, kaasi oo Ujeedadiisu tahay in lagu weeraro gudaha Kenya.
Hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo madaxda laanta sirdoonka ee Nisa ayaa ka wadahadlay sidii weeraro loogu qaadi lahaa ciidanka milatariga Kenya ee howlha nabad ilaalinta u jooga Ismaamulka Jubbaland.
Warbixintaan lagu qoray wargeysyada The Star iyo Standard ayaa dhanka kale lagu sheegay in la isla gartay in sirdoonka Soomaaliya uu dhiibo dhaqaalaha ku baxaya abaabulka weerarada Al-Shabaab.
Xubno ka tirsan NISA oo ay tababareen ciidanka Kenya ayaa dhanka kale la xaqiijiyay in ay maleegayaan weerarada ka dhanka ah milatariga KDF-ta ee ku sugan Soomaaliya.
Dowlada Kenya ayaa aaminsan saraakiisha hey,ada sirdoonka Soomaaliya ay qeyb ka yihiin qorshaha Al-Shabaab ay la damacsantahay in weeraro ay kaga geysato gobolka waqooyi Bari.
Warbixinta eeda ah ee wargeysyada Kenya daabaceen ayaa dhanka kale lagu sheegay NISA ay dhiibeyso dhaqaalaha iyo agabyada kale ee muhiimka ee qorshaha weerarkaan iyo macluumaad la xiriira dhaqdhaqaaqa milatariga Kenya ee ku sugan xadka labada wadan ee qeybta ka ah dallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom.
Kan-xigaSuuqa ganacsiga Islii ee magaalada Na...
Kan-horeSenator Falhada Imaan oo baaq muhiim ...
54,164,892 unique visits